AnimeLog HAIYO Rufu rweCrunchyroll Kana Funimation - Zvimwe
AnimeLog HAKUSI Rufu rweCrunchyroll Kana Funimation, Icho Hachisi Chinhu Asi Clickbait
AnimeLog ndiko 'kutsiva' kwe KissAnime mushure mekufa kwayo kuchangobva kuitika. Kana zvirinani ndizvo zviri kudanwa nevamwe vanhu.
Uye zvisingaiti - clickbait YouTubers uye vaparidzi vanoti 'kufa kweCrunchyroll uye Funimation'.
Hazviwani zvakare kubhaitbait kupfuura izvozvo , tisingataure zvisina musoro uye kunze kwekubata.
Vamwe vateveri veanime vanoita kunge vanobvumirana nazvo kunyange hazvo asi kusvika padanho rekuwedzeredza.
Nah f * ck it, ivo vari kuwedzeredza zvakanyanya ...
Nhau dzakanaka munhu wese! Anime ichakurumidza kutanga kuve yemahara pane youtube pasi peiyo chiteshi Animelog, saka hapachina crunchyroll inobhadhara kutarisa pic.twitter.com/r8neDoP46m
- & # x1f351; (@RealDevuil) Nyamavhuvhu 19, 2020
Animelog weeb cheerleader vanoseka. Vakaenderera mberi nezve kumagumo kweFunimation neCrunchyroll, apo raibhurari iripo zviri pachena kuti ichave yechinyakare anime senge Doraemon naTezuka. Aya animes ndiwo jam yangu, asi zviri pachena kwete yavo.
- massoluk - Nhema Hupenyu Nyaya. (@massoluk) Nyamavhuvhu 17, 2020
Ndiri kufara kuti Crunchyroll uye Funimation ichaiswa kunze kwebhizinesi nekuda kweAnimeLog. https://t.co/h2eewR0NCM
- Zaelkrie & # x1f1ff; & # x1f1e6; (@kudzaimusic) Nyamavhuvhu 17, 2020
Ivo vanofunga anime studio kutenderera kuburikidza neYouTube monetization kuri kuuraya Funimation uye Crunchyroll. pic.twitter.com/P38KrmKvof
- Kugutsikana (@kugadzirisa) Nyamavhuvhu 18, 2020
Sezvauri kuona neaya maTweets, vamwe vateveri vanga:
CHOKWADI tenda AnimeLog ichauraya Funimation uye Crunchyroll.
Izvo zvinoreva zvakare zvidiki zveanime kutenderera masevhisi.
Uye vamwe vanotenda AnimeLog ndiyo 'ramangwana'.
Kana yakanaka kutsiva yeKissAnime.
Iyi ndiyo mhando yezvinhu zvandinofanira kuseka.
Ndinoiwana, mafeni ari DESPERATE ekushambadzira kweanime kuti uvandudze. Uye vane shungu dzebasa rinovapa zvavanoda.
Asi… AnimeLog haisi knight yako mune inopenya nhumbi dzokurwa ndinotya.
AnimeLog haina kukwana zvakakwana 'kuuraya' chero chinhu
AnimeLog mhedzisiro ye30 Anime studio kuuya pamwechete kuti sh * t iitike. Ndiyo nguva, ini ndagara ndati kubatana ndiyo nzira yakanaka.
Uye zvimwe zvakawanda, vanoronga kupa 3000 anime mazita emahara pane yavo YouTube chiteshi.
Ivo vanoronga kuzadzisa izvi panosvika gore 2022. Saka usanyanya kunyanyisa kufara.
kana ivo vachizadzisa chinangwa chavo na2022:
Vachave nezvakawanda kupfuura chero yakabhadharwa sevhisi yekushambadzira
Izvi zvinofanirwa kuve pachena kune chero munhu, ndicho chikonzero vanhu vari kunyanyisa kufara vachifunga kuti ichabvisa yakabhadharwa masevhisi ekushambadzira.
Crunchyroll ine anopfuura 1000+ anime mazita muUSA. mune dzimwe nyika zviri kupi kubva:
Zvichienderana nenyika ipi kana chikamu chenyika chatiri kutaura nezvacho.
Izvi ichokwadi nezveFunimation futi asi nhamba dzichava dzakasiyana sezvo vainadzo zvishoma anime papuratifomu yavo.
Mune ino mamiriro AnimeLog inotonga uye ichaita kumwe kukuvara.
Asi izvo hazvisi zvechokwadi
Wese munhu anofunga AnimeLog ndiye muponesi mukuru weanime ari kukanganwa chinhu chimwe: mari.
YEMAHARA inobhadharwa sei?
Zvichava sei nemusoro wemari?
Anime studios achabatsirwa sei?
YouTube kushambadza kuzviuraya zvachose. Ese iwo eanime studio akagovana chidimbu chidiki chepayi pakati peumwe neumwe ibenzi.
Kana vakafunga kuita mari nayo nenzira iyi vanobva vadzidza kuti ibhizinesi rakaipa. Kwete nekuti kushambadzira hakuiti mari, asi nekuti hazvienderani neiyo indasitiri bhizinesi modhi.
Toei Mhuka uye nevamwe vese, vakuru kana vadiki, vanogona kupa yakawanda 'yemahara' anime sezvavanoda. Ivo vanogona kuzadza iyo YouTube chiteshi kudzamara ichiputika neanime kana vakasarudza.
Pakupera kwezuva - mari inoda kugadzirwa, kana zvisina kudaro inomira HAPANA mukana wekudzinga makambani ekutenderera eanime.
Uye kutamba mukati mematunhu eiyo YouTube's system haisi iyo yakangwara pfungwa.
Kana studio dzeanime dzikavaka yavo WEBSITE pamwechete uye vakatora nzira iyi ndingafarire. Vaizove nekutonga uye kuwedzeredza nenzira iyoyo.
Izvo zvinowedzera zvekudyara kwenguva refu, uye ini ndinoona iyo 'YouTube' chinhu chavari kuita sekudyara kwenguva pfupi.
Ivo zvirinani vakaronga kumberi mberi nekuda kwavo pachavo.
animes akafanana mudiwa mufranxx
Iyo chete nzira AnimeLog inogona kukuvadza CR / Funi:
Usarega marezinesi uye ramba kuatengesa.
Govera anime yemahara kwemakore mashanu zvakatwasuka.
Chengetedza zvese mukati meJapan.
Tama kubva kuYouTube kuenda kune yavo yepamba imba.
Asi chokwadi chiri Toei Mhuka uye mamwe makumi maviri nemapfumbamwe eanime studio hazvina kuvakwa saizvozvo.
Havana iyo mwero wemari uye midziyo yekuvachengeta vachienda kunotora. Iyi ndiyo nzira ye 'Amazon' asi Amazon yakadhonza nekuti yaive nevatengesi.
MaJapan anime studio haana rutsigiro rwakadaro. Saka hachisi chinhu kunze kwekurota.
Iroto rakanaka, asi vateveri veanime vanofanirwa kumira vofunga nezvehupenzi hwezvavanenge vachifungidzira.
Ini ndinoda zano reAnimeLog asi ndiyo nzira isiriyo kunze kwekunge vaine chimwe chinhu chakachengeterwa pasi pemugwagwa. Nekuti haisi inoshandisika kwenguva refu yekudyara.
Ngatipedze izvi neeseti yakakodzera maTweets:
Wakaunzwa kuAnimeLog, yeJapan-based, US-yakabhadharwa mari, Youtube chiteshi kuronga kupa anime yemahara.
Vamwe varikuti ndiyo 'Kufa kweCrunchyroll / Funimation'.
Izvo zvachose hazvisi. https://t.co/4OK6EBYeOe
- Canipa | MWARI WAUNONAMATA WAKAFA & # x1f607; & # x1f47f; (@CanipaShow) Nyamavhuvhu 17, 2020
Parizvino, inongowanikwa muJapan, nezvinhu zvakaita seMangwana Mukomana Conan uye boka revana anime. Asi ivo vanoronga kuwedzera zvinyorwa zvidiki kune zvimwe zvaburitswa.
Asi hechino chinhu: Youtube shambadziro yemari haizombogadzirise iyo mari yakarasika mukupa marezinesi.
Kunyangwe makuru eChannel chiteshi ainetseka kuita yakawanda seCrunchyroll kana Funimation kuburikidza nemari yemari. Uye nepo mutoro wezvitoro uchiparadzira nhau idzi nema skrini eOne Piece, Dragon Ball Super, uye My Hero Academia, pane zero mukana iwo achave ari pairi.
Iyo sosi hombe yemari yeanime nhasi ndeyekunze kwenyika marezinesi ekubhadhara kubva kumasevhisi ekushambadzira. I 'kurota kweanime studio kuunganidzwa pamwe nekuburitsa yavo yese yemahara paYouTube' kurota kunouraya ingangoita hafu yemari yese kune iyo indasitiri yese.
Parizvino, indasitiri yeAmerican anime ndeimwe inodzorwa naSony, AT & T, Netflix. Kuramba marezinesi kumakambani aya uye kuasunungura wega kuburikidza neYouTube isarudzo inotyisa yechinhu chero chipi zvacho kunze kweyeAPA yakachipa kana firimu pfupi.
Iyi haisi indasitiri diki zvakare. Kana iwe uchizotanga kutanga, inofanirwa kuzadza niche. Kufanana nekuti RetroCrush iri kuburitsa yakadii anime. Uye AnimeLog ingangoita zvakafanana nezvisina kunyoreswa zvekare.
Asi hazvisi kuenda 'kutora pamusoro indasitiri' sevamwe vanoti / tariro.
Nhau sosi: Twitter.
Iyo Dambudziko Neanime Piracy Uye Maitiro AINODA Kuti Igadziriswe
Toei Mifananidzo ye 'Yemahara' Anime Yekufambisa Sevhisi Haizobvisise Piracy
ndeipi yakanakisa anime nguva dzese
hupenyu asi chiroto chemombe bebop
runyorwa rwechidimbu chehupenyu anime